ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက ဒုတိယမြောက် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက ဒုတိယမြောက် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြု
၈ စင်းမြောက် ကမ္ဘောဒီးယား-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေးတံတားက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ ဒေသခံများအတွက် မျှော်လင့်ချက်များ ယူဆောင်လာ
တရုတ်နိုင်ငံက မလေးရှားနိုင်ငံသို့ နောက်ထပ် Sinovac ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ တစ်သန်းစာ ထပ်မံလှူဒါန်းမည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့၌ တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းသည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား ပြသနေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား မေ ၂၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဒါကာ ၊ ဇွန် ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နောက်ထပ် တစ်မျိုးကို အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။Sinovac Life Sciences Co. Ltd က ထုတ်လုပ်သည့် “CoronaVac” သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိသည့် ပဉ္စမမြောက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ကြောင်း ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန(DGDA)က ယင်းကြေညာချက်အား ဇွန် ၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ CoronaVac ကာကွယ်ဆေးကို အရေးပေါ်အသုံးပြုရန်အတွက် ပြည်တွင်းထိပ်တန်း ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Incepta Vaccine Ltd က ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားခဲ့ပြီးနောက် ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန(DGDA)က ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
CoronaVac ကာကွယ်ဆေးသည် အခြားနိုင်ငံများစွာ၌လည်း အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(WHO)ကလည်း CoronaVac ကာကွယ်ဆေးအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုသည့် ဆေးဝါးစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် အစောပိုင်းက ခွင့်ပြုထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒါကာမြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးကောင်စီဝန် Hualong Yan က ဇွန် ၅ ရက်တွင် ပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ လှူဒါန်းသော Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယသုတ်သည် ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် ပို့ဆောင်ရန် အသင့်ရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းဦးဆောင် ဆေးပညာကောလိပ် လေးခုမှ ဆေးကျောင်းသား ၁,၀၀၀ ခန့်သည် မကြာသေးမီက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ် ထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက လှူဒါန်းသော Sinopharm ကာကွယ်ဆေးများအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် ကပ်ရောဂါအား ထိန်းချုပ်ရန် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရေး လှုပ်ရှားမှုကို ဇန်နဝါရီ ၂၈ တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ကပ်ရောဂါသည် ယခုအထိ နိုင်ငံအနှံ့ ပြန့်နှံ့နေကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၆ ရက်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 လူနာသစ် ၁,၆၇၆ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၃၈ ဦး ရှိကာ လူနာပေါင်း ၈၁၀,၉၉၀ ဦး နှင့် သေဆုံးသူပေါင်း ၁၂,၈၃၉ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Bangladesh approves second Chinese vaccine for emergency use
DHAKA, June6(Xinhua) — Bangladesh’s drug regulator has authorized the emergency use of another Chinese COVID-19 vaccine in the country.
Directorate General of Drug Administration (DGDA) made the announcement Sunday, saying “CoronaVac”, manufactured by Sinovac Life Sciences Co. Ltd, is the fifth COVID-19 vaccine to get emergency use approval in Bangladesh.
The DGDA gave the green light after the leading local pharmaceuticals company Incepta Vaccine Ltd applied for its approval for emergency use in the country.
CoronaVac has already received emergency use authorization in dozens of other countries.
The World Health Organization has also issued Emergency Use Listing status to the CoronaVac vaccine.Bangladesh’s drug regulator had earlier authorized the emergency use of China’s Sinopharm COVID-19 vaccine.
Hualong Yan, minister-counselor of the Chinese Embassy in Dhaka, Saturday said the second batch of Sinopharm vaccines donated by Chinese government is ready for delivery by June 13.
About 1,000 medical students from Bangladesh’s four top leading medical colleges have recently taken their first shot of the COVID-19 vaccine thanks to Sinopharm vaccines donated by China.
Bangladesh kicked off its COVID-19 vaccination drive on Jan. 28 to rein in the pandemic that has so far spread across the country.
On Sunday, the country’s Directorate General of Health Services reported 1,676 new cases of COVID-19 and 38 new deaths, bringing the number of total cases to 810,990 and the total death toll to 12,839. Enditem
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၌ ရထားတိုက်မှု ဖြစ်ပွားရာ လူ ၃၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးပြီး ၅၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၁၀ သန်းကျော် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည်